Ndị na -emepụta ngwo oriọna ngwo ngwo na ndị na -ebubata ya - ụlọ ọrụ china chin
Ọchụchọ dị mkpa: Ọkụ Rattan Rattan Pendant Light Oriọna Rattan Ọkụ Rattan Floor Ọkụ Pendant Bamboo Ahịrị Isiokwu Ngwo
Achọrọ ịzụta oriọna achara dị ọnụ ala?
Ị nwere ike ịhụ ụdị ụdị ọ bụla oriọna bamboo kacha mmana webụsaịtị ụlọ ọrụ Xinsanxing bamboo, chọta ọrụ aka oriọna achara dabara gị! Ngwaahịa niile dị oke mma, ị ga -ahụkwa na ọnụ ahịa ya bara uru yana ọnụ ala.
Nke anyị ngwo ngwongwaahịa niile ejiri aka mee. Oriọna achara nwere ọmarịcha ọdịdị, usoro nrụpụta dị mfe yana uru ojiji dị elu. Jiri ihe achara eke, nke na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na enyi na gburugburu ebe obibi, ọrụ aka dị ka mkpụrụ osisi vaịn mee ihe nrịba ama n'atụghị egwu.
Oriọna ndị e ji ihe achara rụọ dị mfe ma maa mma n'ile anya na ọdịdị na -agbanwe agbanwe, na -egosipụta ekele nke oriọna na oriọna. N'ihe banyere ọrụ, ọ bụ ụdị oriọna ọhụrụ na -ekwusi ike na ọrụ, ọdịdị na ihe ịchọ mma.
Ahịrị bamboo nke ejiri achara a kpara emepụta ihe ịchọ mma dị mma na mgbidi seramiiki gị. Kwe ka ọkụ banye n'ime ụlọ gị nwayọ.
A na -eji ọmarịcha osisi achara mee oriọna ndị a mara mma, na oriọna achara mara mma nke ukwuu dị ka oriọna ọla edo pụrụ iche. Ọ bụkwa ọmarịcha aka ọrụ ọgbara ọhụrụ, pụrụ iche na ihe okike, nke na-eme ka ọrụ abalị ma ọ bụ ọmụmụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ndịngwo oriọnaanyị na -emepụta na -abịa n'ụdị, nha na agba dị iche iche. Agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha bụ omenala, anyị na -eji aka aka mee ka ị nweta ahụmịhe na -eju afọ.
Ndabere nke ngwo ngwoụlọ ọrụ mmepụta oriọna achara mepụtara ma ree ya bụ plastik ma ọ bụ ọla. Ọdịdị nke oriọna achara nwere ike ịdị mfe, pụrụ iche, ma ọ bụ ụdị aghụghọ ndị ọzọ, mana nrụnye dị mfe ma dịkwa mfe.
Xinsanxing bụ ọkachamara na -emepụta china achara n'ala. Anyị nwere achara dị iche iche nke oge a ma ọ bụ retrongwaahịa oriọna. Ihe dị ka 70% n'ime ha bụ chandeliers achara, 20% bụ oriọna tebụl achara, 10% bụ oriọna ala achara.
Anyị na -enye ọrụ ahaziri iche nke nha, ụdị, ihe, agba na ọnụ ahịa dị iche iche. Ị nabatara ịkpọtụrụ anyị n'oge ~
ọrịre ụlọ ala bamboo, oriọna ngwo atọ ọgbara ọhụrụ | XINSANXING
ọla kọpa achara n'ala, oriọna ala nwere ndo achara | XINSANXING
Oriọna Bambo n'akụkụ àkwà, nke ejiri aka mee na narị afọ nke narị afọ nke okike Creative Bamboo Bedside Lamp | XINSANXING